Abaqeqeshi abaPhezulu, Malta
Siziqhenye ngokusebenzisa enye yezona zikhulu kunye neyona mihla kakhulu yoQeqesho loQeqesho, i-Mini Bus, kunye neCuffer Driven Car Fleet.
Igama leNkulumbuso kwiMatriki ezithuthi
Igama lethu lakhiwe ngokuzinikela kwimigangatho ephakamileyo, inkonzo yekhwalithi, kunye nokugxilwa kwabaxhasi.
Iminyaka eyi-70 yoQeqesho loQeqesho
Ukususela kwi-1944, sinike uxolo lwengqondo kubathengi abafuna iinkonzo zokuthutha eMalta.
WAMELWA UKUFUNDA I-PARAMOUNT COACHES
Abaqeqeshi abahamba phambili bayinkampani ehamba phambili yokuthutha eMalta ngokunikezela ngeCaven Hire, Mini Bus, kunye neenkonzo zeCuffer Driven Car eMalta ukususela kwi-1944. Isithembiso sethu sisimo sengqondo esithile esigxile kwiimfuno zabathengi ukuqinisekisa izixazululo ezinokuthenjwa.
Siyaziqhenya ngokusebenza komnye weeMalta ezinkulu kunye neenqanawa zanamhlanje zokubonelela ngenqanaba eliphezulu leenkonzo kwiZikolo, iYunivesithi, ii-ambassasi, iiNkonzo, ii-DMC, i-Tour Operators, uRhulumente kunye noLawulo lweNgingqi.
Abaxhasi bethu baqhubeka bekhetha ukuthula kwengqondo esibaphayo. Sifinyelela oku ngoku nolwazi lwethu olugqwesileyo lwezothutho eMalta kunye nekhono lethu lokusingatha naziphi na iziganeko ezinokuvela.
Ngomnatha wethu wendawo, sikwazi ukubonelela ngeenkonzo ezinokuthenjwa kunye nezithengelelwano eziseMalta kwimicimbi yezibambiso, abagibeli bezithuthi ezihamba ngeenqanawa, ukudluliselwa kwe-moya kunye nokuthutha isikolo / iikholeji.
Siyeyona nkampani enkulu yokuthutha esikolweni eMalta ekubonelela ngezothutho kubafundi bakarhulumente, abucala, ulwimi lwangaphandle kunye nezikolo zesonto.
Sinikeza uluhlu olubanzi lwee-tours zaseMalta kunye neGozo ukudala amava angenakulinganiswa nakwezobutyebi zendalo nezendalo.
I-MALTA INGXELO YEZICWANGCISO
Ukubonelela umqeqeshi wesikhumulo sezindiza ofike ngexesha kunye nezobuchwepheshe.
Ukunikezelwa kweempahla ezivela kwiinqanawa zokuhamba ngeenqanawa kunye nokutshintshwa kwendawo ephuma kwiihotele kunye neendawo ezijikeleze iIltese Islands.
IQUMRHU NEZINYE IZIGANEKO
Ukuhambisa izithuthi zothutho, ukudluliselwa kwe-moya, kunye neemfuno zokubheka izinto ngokubonelela ngeenkonzo ezifanelekileyo, ukuphendula ngokukhawuleza kunye nokuthembeka ngokupheleleyo.
IINKONZO ZOKUTHUTHA NEZOBUCHWEPHESHE
Ukuba unqwenela ukubhuka okanye wenze uphando, zikhululeke ukudibanisa nabasebenzi bethu bobugcisa nabanobubele. Baya kukunceda ekuphenduleni nayiphi na imibuzo enokuyenza kunye nokuhlangabezana neemfuno zakho zokuthutha.
Abaqeqeshi abakhulu baye banikezela ngeenkonzo zokuthutha kwiMalta Football Association ukususela kwi-2002.
Amaqela alandelayo azwelonke nakwamanye amazwe awamkelekileyo asebenze ngempumelelo ngamaziko aParamount Coaches:
I-ARMENIA, IBULGARIA, IKIPRUS, IDENMARK, IPENLAND, IGORORIA, IGREECE, I-INTER, ISRAEL, ILATVIA, I-LUXENBOURG, IMACEDONIA, IMANCHESTER UNITED, IRTHERN IRELAND, NORWAY, IPORTUGAL, SWEDEN,
Umbutho webhola leMalta
"I-EF uLwimi lokuTyelelo luye lwasebenzisa i-Paramount Garages ezininzi kwiimfuno zezothutho kwixesha le-15 iminyaka. Izicelo zethu zihlala zidibene kunye nobuchule obuninzi kunye nenkonzo ehlala isithembeka kwaye ithembekile. Umgangatho wabaqeqeshi kunye nesimo sengqondo sabaqhubi kubonisa oku. "
EF ULWIMI LWESIKOLO
Ngokufuduka kwangoko kwinqanawa yabantu abangaphezu kwe-300 baseMerika nakwezinye iintlanga ezivela eTripoli, eLibya emva kwethu, ndifuna ukuthatha isikhashana kwaye ndenze ukuba ndibulele ngokunyanisekileyo kuwe kunye neParamount Coaches Ltd. Ngenxa yokuncedisa kwakho ngoncedo ngexesha lokufuduka kunye nemigudu elandelayo ukuncedisa abaphumayo.
Ukuzimisela kwakho ukulungelelanisa ngokugqithiseleyo nabasebenzi be-Embassy kwinkqubo yokukhutshwa kwababaluleke kakhulu ukuba indlela abaphumayo bekwazi ngayo ukuhamba kunye nokufumana uncedo oluyimfuneko. Ngokukodwa, ukuguquguquka kwakho nokuqonda njengoko ishedyuli yokuhamba kweefeshi eguquke kunye nemozulu yayithandwa ngokunyanisekileyo. Asikwazanga ukubanceda ngokuphumelelayo abafuduka ngaphandle kokuxhasa kunye nokuzibophezela kwiParamount Coaches Ltd. "
UMASEBENZI WASE-MALTA wase-US
UMnu Douglas W. Kmiec - I-ambassador Ku-US
"Imilinganiselo yeGaraban ye-Mosta, ngoku sele ikhonza amasebe e-Yunivesithi aneenkonzo zokuthutha ezifanelekileyo, kwiminyaka yokugqibela ye-35.
Ngeli xesha, sifumene le nkampani yokuthutha ethembekileyo kwaye ixhomekeke kakhulu kumakhasimende. Kungakhathaliseki ukuba ngumqeqeshi, i-minibus, imoto eqhutywe ngumqhubi, ukugcina ixesha kunye nokuhanjiswa kweenkonzo kuyeyona nto ingcono kunazo zonke ezinokufikelela kwiziqithi.
Ngaphandle kwexabiso elikhuphisanayo, abaqhubi abanobubele kunye nokugcina ixesha siye safumana iParamount ukuba iqabane eliphambili ekuncedeni ukuba sikhuphisane nokupakisha izibonelelo ezilungileyo kakhulu kubafundi bethu bezinye iintlanga nakwiindwendwe ezifundisayo. "
Malta University Holding Inkampani Ltd.
I-MALTA UNIVERSITY HOLDING COMPANY
Iminyaka yethu ye-70 yokuzibophelela ekugqweseni isinike amava amaninzi kwiinkampani zothutho eMalta, esinika ithuba lokubonelela uxolo kwengqondo kunye nenkonzo yobungcali kubathengi bethu.
Iminyaka eyi-70 yamava